Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – War horta Soomaalidu maxay Kitaabka Allaah u lee-leelinanayaan! Miyaanay muslimiin ahayn? Qofka haddii lagu dhaarin lahaa wax qabiilkiisa wax u dhimaya………….?
War horta Soomaalidu maxay Kitaabka Allaah u lee-leelinanayaan! Miyaanay muslimiin ahayn? Qofka haddii lagu dhaarin lahaa wax qabiilkiisa wax u dhimaya………….?
Nov 19, 2012 SOMALI NEWS 0
Run ahaantii waxa in badani is waydiinaysaa, oo ku Dhaka faarsanyihiin, waxay Soomaalida inteeda badani aaminsantahay! Waxa lagu xakamayn karo, ee uu qofka Soomaaliga ahi xeerinaayo! Soomaalidu dhab ahaantii waa dad dadyowga kale ee aduunka ka dhaqan duwan, waa dad aan intooda badan la garan Karin waxa ay aaminsan yihiin, ee xakamayn kara, in kasta oo ay ku abtirsadaan, diinta Islaamka, hadana
Waxa cadaan ah, in aan diinta iyo ka cabsashada Allaah tacaalaa, aanay xakamaynayn Soomaalida inteeda badan! Dadyowga kale ee aduunka dhamaan waxa xakamaya, waxa ay aaminsan yihiin, ama diin ha ahaato, ama dabeecad, ama mabda’ iwm. Arintani waxay sabab iyo aasaasba u tahay dhibtadan dhamaan wayday, ee Soomaalida ka haysata dhinac kasta, waxay sabab iyo aasaasba u tahay burburka iyo
Darxumada aynu maanta ku suganahay, waxay sabab iyo aasaasba u tahay in mudo ka badan labaatan sanadood dalkeenu ku sugan yahay dowlad la’aan, waxay sabab iyo aasaasba u tahay, in dowlad kasta oo dalka loo soo dhisaa isla markiiba fashilanto, oo shacabku ka soo horjeestaan! Waayo markaynu Soomaali ahaan meel isugu tagno, oo ku gorfayno arimaheena iyo dhibaatooyinkeena, inta badan waan
Isku afgaranaa, xal baana ka gaadhnaa arimaha ina dhex yaala intooda badan, laakiin had iyo jeer waxay dhibta ama caqabaduhu yimaadaan, marka lays yidhaahdo fuliya, oo ficil u bedela wixii lagu heshiiyay, taana waxa sabab u ah dadka loo doorto inay fuliyaan, wixii laysku afgaratay, oo la yimaadaa hab-dhaqan aan waafaqsanayn wixii laygu heshiiyay, oo iyagu qorshayaal guracan, oo ka hor imanaaya wixii lagu
Heshiiyay, oo iyaga u gaar ah uun, markiiba jeebka kala soo baxa! Arintanu maaha mid cid u gaar ah, bal waa dhibaato wada saamaysay inta badan ummada Soomaaliyeed, ha ahaado wadaad, waranle, siyaasi, aqoonyahan, rag, dumar, dhalinyaro iyo cirooleba, marka laga reebo in yar oo uu Allaah u naxariistay, oo ku manaystay caqli suuban, iyo ku hanuunista jidkiisa toosan, hase yeeshee aan waxba ka bedeli Karin
Ummad dhan oo fowdo, jahli iyo fasaad aafayeen, ummad ka duwan ummadaha aduunka, oo aanay jirin wax xakamaynaaya, oo ay xeerinayaan ama ka baqayaan. Bal hada u fiirso, markasta oo dowlad ama maamul la soo dhiso, ha ahaato dowlada dhexe ama dowlad goboleedyada ee, oo ay ku jiraan labada maamul ee aadka loo buun buuniyo, oo la yidhaahdo deganaansho, amaan iyo maamul baa ka jira, waa
Labada maamul ee Hargaysa iyo Garowe ee ( oo isla dhibaatada lagaga cabanaayo dhismaha dowlada dhexe, ay iyana ka jirto, waxa keli ah ay kaga duwan yihiin ay tahay, shacabka oo khaladaadkooda u sabra, kana door bida in ay deganaasho ku noolaadaan dhibaata kasta oo haysta, inta laga helaayo dowlad dhexe oo iyadu wax kala hagaajisa, dadkana xuquuqdooda ka maqan u soo celisa, dowlada dhexe se
Haday qaloocato dee ma jirto wax loogu sabro, oo lays yidhaahdo khaladkooda ay hadhow hagaajinayaan), waxaad arkaysaa iyada oo la leeleelinaayo Kitaabka Allaah ee muqadaska ah, Kitaabka wayn, Quraanka kariimka ah!!! Iyada oo dad aan aaminsanayn, ama aan ku dhaqmayn gacanta loo saaraayo, oo lagu dhaarinaayo, oo haday doonaan ay ku jiraan fujaar aan kaadida iska maydhin ama
Gaalnimo qarsanaaya sida xogo badan lagu helay, amaba aaminsan mabda’yo khilaafsan diinta, oo milada lagaga baxaayo, sida cilmaaninimada iyo shuucinimada, isla markiibana ku dhaqaaqaya wax ka soo horjeeda wixii ay ku dhaarteen, in ay ilaalinayaan, marka arintanu miyaanay nusqaamin iyo meel ka dhaca ku ahayn Allaah tacaalaa iyo Kitaabkiisa muqadaska ah?!!! Miyaanay ahayn markaynu khaladkaa
Wayn caada ka dhignay, in aynu ku jees jeesayno Kitaabka Allaah ee muqadaska ah?!!! Mar hadaynaan se diinta ku dhaqmayn, oo aynaan xeerinayn, Allaahna ka cabsanayn, qof walba isagaa tacaalaa marinaaya xisaabta uu ka mudan yahay ee, miyaanay ahayn in aan raadino wax kale, oo aan isugu soo joogsanayno, oo qofka masuuliyada loo dhibaa xeerinaayo, oo ka baqaayo?!!! Si aynu nafteena ugu
Badbaadino aduunkan! Markaan sidaa leeyahay ma moogani ee waan ogahay, in uu qofku ku dhaarto waxa Allaah tacaalaa ka sokeeya, ay denbi aad u wayn tahay wacayaadu billaah?!!! Hase yeeshee maxaa laga yeeli qof magaca uun Islaam ka ah, aan se aaminsanayn ama ku dhaqmayn diintiisa Allaah tacaalaa! Hada eeg sanad baa loo diyaar garoobaayay, in la dhiso dowlad, oo dhiba badani ummada ka soo
Gaadheen, ugu dambayntiina distuur ku-meel gaadha ah, baa la ansixiyay, odayadii dhaqanka beeluhu waxay soo xuleen baarlamaan Soomaaliyeed oo ka kooban 275 xubnood, Kitaabka Allaah ee muqadaska ah baa dhamaan gacanta loo saaray, oo lagu dhaariyay, waxay doorteen Afhayeen isaga mana aan arag shakhsiyan meel lagu dhaariyay, xogo badanina siday sheegayaan lamaba dhaarin!
Waxay hadana doorteen madaxwayne, isna Kitaabka Allaah ee kariimka ayaa gacanta loo saaray, oo lagu dhaariyay. Intaa la dhaariyay, dhaamaan waxa lagu dhaariyay, in ay distuurkaa la wada dhigtay ay ilaalinayaan, in ay wada jirka iyo midnimada ummada Soomaaliyeed ilaaliyaan! Bal se maxaa dhacay intaa ka dib, madaxwaynihii wuxuu noqday kii ugu horeeyay, ee jebiya distuurkii iyo dhamaan wixii la wada dhigatay
Markii ay khudbadiisii ugu horaysayba, ay ka soo yeedheen hadalo, dhiiri gelinaaya oo kala dhantaalaaya midnimada ummada, markii uu muujiyay dareen ah kalgacal qabiil oo caadifadaysan, oo uu Soomaalida qaarkeed u hayo, qaar kalena kaga fogaanaayo, markii uu soo faadh faadhay dareemo duuganaa, oo damqay boogo aan weli bogsan, oo ummada ku yaala, markii uu midnimadii dalka iyo dadka, ee uu dhaartay yidhi jujuub maaha, halka ay distuurka ku qoran tahay waa lama taabtaan.
Wuxuu isla markiiba isku xeeray, koox ay isku fikir yihiin, oo ay xisbi isku bahaystay ujeedooyin qarsoon, kawada tirsan yihiin, wuxuu keenay ra’iisal wasaare maxlal ah, oo aanu ku dooran aqoon, waaya-aragnimo siyaasadeed iyo mid shaqo toona, ee uun uu ku doortay oo keli ah, kanaa hadalkaaga maqlaaya, oo rabitaankaaga Fulinaaya, iyada oo ay wadanka ka buuxaan rag badan oo Soomaaliyeed, oo aqoon, waaya-aragnimo iyo kartiba u leh mansabkaa, oo aad ugaga haboonaa ninka uu u magcaabay, arintaasu waxay ka hor imanaysaa maslaxada wadanka, ee uu ku dhaartay, waxayna muujinaysaa kelitalisnimadii, ay Soomaalida qaarkeed ku andacoonayeen in ay ka dagaalameen!!
Waxaa taas ka sii darnayd, markii haya’dii sharci Dejinta ama baarlamaanka, ee iyadu ahayd marjacii ama halkii loogu noqonaayay ilaalinta sharciga, ay ku ansixiyeen ra’iisal wasaarihii maxlalka ahaa, ee aan u qalmin mansabka, cod aqlabiyad ah!! Waxa la soo magcaabay, oo uu madaxwaynuhu ra’iisal wasaaraha u yeedhiyay, magacyada golaha wasiirada, oo ka kooban toban wasaaradood, oo dhamaantood ka tirsan xisbiga madaxwaynaha!!!
Madaxwaynaha ma xisbi gaar ah baa doortay, mise shacabka Soomaaliyeed oo dhan!! Si uu golaha wasiirada ugu koobo xisbigiisa!!! Shacabku aad bay uga gedoodeen arintaa, mana aha waxay ka gedoodeen tirada wasiirada ee yar, ee aanay beeluhu ka wada muuqan,bal waxay ka gedoodeen cadaalad darada lagu soo xulay, iyo in ay tahay dowlad dhinac ka raran, bal waxa ku jirta islaan aan midnimada Soomaaliyaba aaminsanayn, oo ku
Andacoonaysa in ay u dhalatay dal kale, oo lagu magcaabo Somaliland, Soomaaliyana ay u dhaxday, oo ay kala yihiin laba wadan, siday hadalka u dhigtay! Ayna ka caawinayso Soomaaliya, oo ay u dhaxday, in ay cagaheeda dib isugu taagto!!! Wallow aanay Fowsiyo inoo sheegin waxa ay ka caawinayso,oo ay u qabanayso Soomaaliya, oo aanay dadkeedu u qaban karayn!!!
Waa islaan labaatankii sano, ee ina dhaafay Ku hawlanayd, oo ka shaqaynaysay, geed gaaban iyo mid dheerbana u fuushay, sidii Soomaaliya loo kala goyn lahaa, waxa la yidhi maxaa habeenkii sacabka loo garaacaa, haadaan xeeladi ku jirin?! Marka madaxwaynuhu hadaanu wadan ajandayaal guracan oo qarsoon, maxaa keenay in uu u magcaabo mansabkii ugu muhiimsanaa dowladiisa, sirtii qaranka oo dhana gacanta u geliyo, oo weliba ku
dheganaado, mucaaradada kasta oo kaga timid shacabka iyo waxgaradka Soomaaliyeed,qof aan midnimada wadanka aaminsanayn, bal ku hawlan sidii loo kala dhantaali lahaa, oo loo kala gown lahaa?!!! Ra’iisal wasaaraha ayaa isku deyay in uu difaaco Fowsiya, isaga oo ummada u sheegay hadal been ah, oo uu ku marin habaabinaayo, waa markuu yidhi Fowsiya ma aaminsana kala gownta wadanka,
Oo waxaan akhriyay distuurka xisbigeeda, iyo xataa kii SNM kumana jiro waxa lagu kala gownaayo wadanka!!! Hadal faariq ah, oo caantayn ah! Miyaanu ka war hayn, in ay iyadu ka hordhacday, oo beenisay hadalkiisa hordhac ahaan!! Maamulka SNM se ma shaki iyo mugdi baa maanta ku jira, in ay rabaan in ay wadanka kala gooyaan!!!
Doodayadu mala-awaal maaha, waa mid micno ku fadhida. Waxan kuu haynaa waxa ay aaminsantahay wasiirada arimaha dibadda iyo khiyaamada madaxweynaha iyo Raysulwasaarihiisu wadaan.
Halkan Riix Si aad u ogaato Beenta Raysul-wasaaraha, kadibna sii dhex-gal cinwaanada kuusoo baxa
Waxa maalimihii ina dhaafay, warbaahinta ku soo baxaayay, war Sheegaaya, in ay Fowsiyo ka dhuumatay dhaartii!!! Oo maxay soo kordhinaysaa ama ka bedelaysaa dhaarta ay dhaarataa?! Sow uun lama mid aha Soomaalidaa kale, ee intay Kitaabka ku dhaartaan, hadana aanu waxba ka bedelayn?! Ee isla markiiba jebinaaya ilaalinta, wixii ay ku dhaarteen! Mise Fowsiya ayaa lagu yaqaanaa, in ay ka taqwad iyo cabsi badan tahay, kuwaa la midka ah!!!Si kastaba ha ahaatee, waxay
Musiibada wayni tahay markii golihii sharci dejintu cod aqlibiyad ah ku ansixiyay, dowladaa dhaliilaha aadka u waawayni ay dul hoganayaan, kamana qarsoonayn dhaliilaha loo soo jeedinayay dowladaas, ee bal waxay u badheedheen, in ay jebiyaan distuurkii loo igmaday ilaalintiisa, ee ay ku dhaarteen!
Markay si duuduub ah, iyada oo aan la siin xildhibaanada waqti ku filan, oo ay ku aqriyaan, kaga baaraan degaan, Kaga doodaan barnaamijka xukuumada, loogu codeeyay, oo aqlibiyad lagu ansixiyay!!! Iyo iyadoo la horkeenay baarlamaanka xukuumad aan dhamaystirayn, oo kala dhiman, taas oo aan waafaqsanayn distuurka ay ku dhaarteen, waxaas waxa lagu dhameeyay, inta sharcigii gees layska dhigay, is kooxaysi, saawa saawayn qabiil iyo laaluush la qaato!!!
Marka aniga oo tusaalayaashan ku dheeraaday, waxay tahay Su’aashu, war mar hadaanay dhaartii iyo Quraankii gacanta la saaray, Soomaalidii xumaanta ka reebayn, oo ka horjoogsanayn, in aanay jebin wixii ay u dhaarteen! miyaanay haboonayn, inaan arinta gees kale uga wareegno?! Oo aan doono waxa ay dadkanu xeerinayaan, ee ka horjoogsanaaya in ay xumaan iyo sharci daro ku kacaan!
Tusaale bal in xaga qabiilka lagu aafayay dadkan laga maro, oo lagu dhaariyo Qofka wax qabiilkiisa wax yeeli kara, haduu jebiyo, oo baal maro sharciga ama distuurka la wada samaystay, sida in lagu dhaariyo dhaartii dadka jaahiliinta ah “ ma tii aad wiil iyo walaalba waydaabaa” iyo “ma tii aan qabiilkaaga iyo tolkaa habari ka hadhin baa” iwm, oo laga yaabo, xataa hadii uu taas jebiyo qofkii lagu dhaariyay, in ay ku kacaan dadkii iyo qabiilkii uu ku dhaartay, oo yidhaahdaan habaar Iyo guhaan baad noo soo jiidaysaa, shaki kuma jiro in intiina badani la yaabaysaan hadalkan!!
Laakiin muhiimada iyo ujeedada aan ka leeyahay, waa in aan helo wax kale oo xumaanta, inaga qabanaaya, maadaama aanay diintii inaga qabanayn, si aan u kala nabad helo, oo waxaan wada dhisanaa inoogu hagaagaan,waana arin dhab ahaantii diraasad iyo baadhitaan dheer uga baahan waxgaradka,
Aqoonyahanka iyo culimada Soomaaliyeed, la’aanteedna aanay jirin haba yaraatee, wax inooga hagaagaya nidaam aan samaysano ama dowlad aan dhisano iyo hab dhaqankeena toona.
Halkan Ka Daawo Dagaal Iyo Boob Ku Socda Soomalida Kenya ku nool Iyo Booliska oo ku daawanaya Silsilada Taariikhda Islaamka, Q.3aad (Muuqaal Guud Oo Ku Saabsan Carabta Nabiga Ka Hor)